Raadso daryeel haddii aad tahay magan-gelyo doon ama bilaa waraaqo - 1177 Vårdguiden
Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - somaliska
Raadso daryeel haddii aad tahay magan-gelyo doon ama bilaa waraaqo
Wac telafoon lambarka 1177 haddii adiga ama qof kale xanuusanayo oo aad doonaysid inaad kalkaaliso caafimaad weydiiso wixi ku saabsan talo. Waxa kale oo aad heli kartaa talo ku saabsan halka aad ka raadsanayso daryeel caafimaad.
Kalkaalisadan caafimaad waxay ku hadashaa iswiidhish iyo badanaaba xitaa ingiriisi.
Rugta daryeelka iyo rugta caafimaadka
Wac rugta daryeelka ama rugta caafimaadka haddii adiga ama qof kale xanuusanayo ama dhaawac qabo. Halkaasi waxad ka heli kartaa caawimaada waxyaabo badan oo waa badanaaba waa meeshaas halka aad tagayso ugu horeyn.
Waxa fiican in marka hore la waco. Haddii aad hesho ballanta booqasho waxay shaqaalaha daryeelku balamin karaan turjubaan haddii taas loo baahdo. Hal booqasho kharashkeedu waa ugu badnaan 50 karoon haddii aad tahay magan-gelyo doon ama bilaa waraaqo. Badanaaba bilaash ayay u tahay caruurta iyo
Tag qaabilaada deg-dega ee isbitaalka haddii adiga ama qof kale aad u xanuusanayo, dhaawac khatar ah qabo ama leeyahay dibaatooyin maskax ahaan oo khatar ah oo si dhaksho ah ugu baahantihiin caawimaad. Qaabilaada deg-dega waxay furantahay maalintii iyo habeenkii oo dhan, maalin kasta.
Hal booqasho kharashkeedu waa inta u dhaxaysa 120 iyo 450 karoon.
Lambarka qaylo dhaanta 112
Wac telafoon lambarka 112 haddii qof naftoodu khatar ku jirto oo aad si dhakhso ah ugu baahantahay caawimaad.
Waxad heli kartaa caawimaada turjubaan haddii aanad ku hadlin iswiidhish.
Shaqaalaha daryeelka ayaa kaa caawinaya in la ballamiyo turjubaan. Tani waa bilaash. U sheeg shaqaalaha daryeelka inaad u baahantahay turjubaan marka aad ballansanaysid booqashadaada. Waxa aad isticmaali kartaa khariidadan luqadaha si aad u muujiso nooca luqada ee aad u baahantahay.
Turjubaanku qolka ayuu joogi karaa ama iyadoo loo maray telafoonka.
Sir haynta shaqada
Shaqaalaha daryeelka iyo turjubaanadu waxay haystaan sir haynta shaqada . Tani micnaheedu waa in iyagu waxyaabaha kugu saabsan adiga aanay ka sheekayn karin iyadoo aanad u sheegin inay ka sheekayn karaan.
Waxa aad u sheegto shaqaalaha daryeelka ama turjubaanku raad ma ku yeelanayaan fursadahaaga inaad sharci ka hesho Iswiidhan.
Akhri dheeraad ku saabsan fursadahaaga in la raadsado daryeel ama daryeelka ilkaha gudaha Iswiidhan haddii aad t
Olle Olsson, Stockholm